ဖူးနုသစ်: ယူနီကုတ် ပြောင်းဖို့လိုအပ်သမျှ
Posted by ZT at 1:20 AM
:-) Lets see,
How many percent of blog will convert,
How many percent of converted blog will rollback, or
How many percent will stop / stuck in middle.
တကယ်ကြီး ပြောင်းတော့မယ်ပေါ့။ ဖတ်လို့ရအောင်တော့ သွင်းထားဦးမယ်။ လူပျင်းဆိုတော့ ဒီလို တစ်ဆင့်ချင်း ခွံ့ကွေျးမှဘဲ လိုက်လုပ်ဖြစ်တော့မယ်။ အရင်ကထက်တော့ နည်းနည်း တိုးတက်လာပြီ။ myanmar3 တစ်ခုတည်း သွင်းထားတုန်းက ဖောင့်တွေ ကောင်းကောင်း မပေါ်ဘူး။ အခု အကုန်သွင်းလိုက်တော့ ဝီကီပိဒိယ ဖတ်လို့ ရသွားပြီ။ အရင်တစ်ခေါက် keyman တုန်းကလည်း အဆင် မပြေဘူး။ ထပ်သွင်းကြည့်ဦးမယ်။ ယူနီကုတ်ကီးဘုတ်အတွက် FAQ ဆိုတာ link မှားနေတယ်ထင်တယ်။ FAQ ရှာလို့မတွေ့လို့။
I copy and paste too much and placed the wrong link for FAQ. Now I have corrected the link for FAQ. :)
ဟ အရင်ဖာတ်လို့ရနေတာတွေပါမရတော့ပါလားဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလည်း ။ အရင်က ဇောဂျီပဲရှိတယ် ဖာတ်လို့ရတယ် ကိုZT ပြောလိုက်တာတွေတင်လိုက်တာ ဘာမျှဖာတ်မရတော့ဘူး
ဖောင့် Install လုပ်ရုံနဲ့တော့ ဘာ Setting မှ မပြောင်းပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် Installer ထဲက ဖောင့်ဖိုင်တွေကို သပ်သပ် ရွေးထုတ်ပေးထားတာ။
ဘာတွေ အင်စတော လုပ်လိုက်တာလဲ။ ဘယ်စာမျက်နှာတွေ ဖတ်မရတာလဲ။ ဘာ Browser သုံးလည်း တစ်ချက်လောက် ပြောပြပေးပါ။
Myanmar Unicode 5.1 fonts တွေအားလုံးစက်ထဲသွင်းပြီးပါပြီ။ ဝီကီပိဒိယထဲ၊ နောက် mmthinker ထဲ ဝင်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ အဆင်ပြေပြေမြင်ရတယ်။ fonts install လုပ်လိုက်တာကလွဲလို့ တခြားဘာsettingမှမချိန်ဘူး။ firefox settingထဲမှာ Padauk, Myanmar3, Parabaik, "MyMyanmar Unicode" ပဲချိန်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် firefox နဲ့ဆိုရင် bbc က မြန်မာဝမ်း၊ RFA က bit ဆိုတဲ့font သုံးထားပြန်တော့ အဆင်မပြေပြန်ဘူး။
စာရေးတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ keyman အပြင် အခြားဟာတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်
ကျနော်လဲ ဒီနေ့ညပဲ ကြိုးစားကြည့်မယ် ကိုဇက်တီ ရေးထာတွေကို ကြိုက်လို့ လိုက်ပြောင်းတာနော်... မရရင်တော့ ဇော်ဂျီပဲ ပြန်သွားမှာနော်.. အခု ကိုမာခ့်လုပ်ပေးတဲ့အသစ်နဲ့ သုံးတာတော့ အိုကေတယ်ဗျ...
စာရေးတဲ့ဟာကို keymanနဲ့မသုံးပဲ ကျွန်တော် keymagic နဲ့ ekaya တို့ကိုသုံးကြည့်ပါတယ်။ လက်ကွက်အသစ်ဆိုတော့စစချင်းနည်းနည်းကြောင်နေတာကလွဲရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ခက်တာက ကျွန်တော် ပတ်ဆင့်ရိုက်လို့ မရဘူး။ တက္ကသိုလ်၊ ဗုဒ္ဓ၊ လက္ခဏာ၊ အဲလိုမျိုးတွေ ရိုက်လို့မရသေးဘူး။ Shift+f သုံးပြီးရိုက်တာပဲ၊ င်္ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါမှမဟုတ် F ပေါ်ချင်ပေါ်လာပြန်ရော
ekaya dont use shift+f i think.
ခု လို နည်းလမ်းပြတော့လည်း
မြန်မာ wiki ကို ဖတ်လို့ရသွားပြီ။ :)
IT ကို သိပ်နားမလည်ပေမယ့် မှန်တယ်ဆိုတာကိုပဲ သုံးချင်ပါတယ်၊
unicode က ဇော်ဂျီ လို free မပေးဘူးလို့ ကြားပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် မသိပါ။
Khet Myint Myint -> ကျွန်တော်လည်း KeyMagic စမ်းကြည့်တယ်။ ပါဌ်ဆင့် ရိုက်လို့ မရဘူး။
Keyboard Map မှားနေတယ် ပြောလို့ Keyboard Map လဲကြည့်တာလည်း မရဘူး။
Developer ကိုတော့ ဒီအီးမေးလ်မှာ ဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့ တွေ့ပါတယ်။
Ngwe Tun (Solveware Solution) said...
>> unicode က ဇော်ဂျီ လို free မပေးဘူးလို့ ကြားပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် မသိပါ။
There are no Unicode Standards font with selling now. So. Feel free to use it.5Myanmar Unicode fonts was release nowadays. No Worries.
in kms file and generate it to km2
ယူသွားဘာတယ် ( YOU မဟုတ်ဘာ )
ခုလိုမျှဝေပေးထဲ့အတွက် ( ကျေးဇူးအ2 )
ကုလားစာ တရုတ်စာ ထိုင်းစာတွေတော့ ဘာမှ install မလုပ်ပဲ အကုန်မြင်ရတယ် မြန်မာစာတွေကတော့ ဖတ်ချင်ရင် install အရင်လုပ်ရတယ်..။
မြန်မာယူနီကုဒ်က တခြားလူမျိုးတွေရဲ့ယူနီကုဒ်နဲ့ ဘာတွေမှာကွာလဲဗျ...။
အခုလောလောဆယ် Windows Operating System ရဲ့ Native Language Support မှာ Chinese နဲ့ Indian ပါပေမယ့် မြန်မာ ယူနီကုတ် မပါလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် တရုတ်တွေ ကုလားတွေက Install မလုပ်ပဲ မြင်ရပြီး မြန်မာက Install လုပ်မှ မြင်ရတာပါ။
ကျွန်တော်တော့ ဒီကဘဲ ကြိုက်တာဆွဲ ယူတယ်ဗျ။
It's really useful for all time. :) Especially at this moment.
thank u so much ko zt,
i will also change soon :)
ပြောင်းချင်တယ်ဗျာ ...ပြသာနာက အရင်ထဲက unicode ကမငြိမ်သေးဘူးလို့ ထင်တာပဲ ...
မေးချင်တာ က Myanmar3 က 5.1 ကနေ 5.2 ပြောင်းတော့ အောက်ကမြင့် နေရာပြောင်းတယ် ...
နောက်ဗားရှင်း ထက်ထွက်လာလို့ ကိုယ့်ဘလော့ကစာတွေ အမှန်မမြင်ရတော့ပြန်ရင် ရှိသမျှတွေ ပြန်ပြောင်းရဦးမှာလား ...
လား ... လား..လား ...????
The link is dead. Pls correct.